एलिजालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा - Purbeli News
एलिजालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक १३, २०७५ समय: २१:११:४७
फिल्ममा प्रवेश गर्ने सबैको भाग्य चम्किन्छ भन्ने छैन । सबै अनमोल केसी र साम्राज्ञी आरएल शाह बन्न सक्दैनन् । यहाँ पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाउनेको कमी छैन । पत्रकार ऋषि धमलाकी श्रीमती एलिजा गौतम एक उदाहरण हुन् । फिल्म ‘अनुराग’ बाट उनले अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन् ।
रिलिजको तरखरमा रहँदा किन आफ्नै ब्यानरको फिल्मबाट डेब्यु ? भन्ने प्रश्न खुब झेलिन् । छुट्कारा पाउन उनले दीपेन्द्र के. खनालको फिल्म ‘धनपति’ बाट अफर आएपनि नगरेको गफ दिइन् । कुराकानीमा निर्देशक खनालले यो कुरा नकारे । झुट बोलेरै भएपनि आफ्नो वाहवाही गर्न नछाडेकी एलिजालाई यतिबेला डेब्यु फिल्मको नतिजाले बेचैनी बनाएको छ ।